Ansomone 200 IU Somatropin HGH, mividy hormonina fitomboan'ny olona ao Thailand
Vaovao! Genotropin - Ny isam-bolana
Bitcoins (10% fihenam-bidy)
Fandefasana any Thailand
Lahatsary mahasoa momba HGH
Ahoana no atao mba tsy ho lasa tra-boina?
Fandefasana Courier maimaim-poana & vola entana | Ora: 9: 00 am - 8: 00 pm | Call & WhatsApp, Telegram, Viber, Line + 66 61 686 66 55
Regular vidiny 17,000.00 ฿ Sale
Lohateny Default - Voaroaka
Recombinant Hormonal Growth Human For Injection
(Somatropin / HGH, rDNA Origin)
Anhui Anke Biotechnology (Vondrona) Co., Ltd.
Ny Ansomone® dia karazam-pahaizana mangetaheta fanosotra amin'ny Hormone (HGH) miaraka amin'ny 191 amino asidra, avy amin'ny engineering E.coli, ary mitovy amin'ny hormonina voajanahary voajanahary ao amin'ny fizotry ny asidra amine sy ny rafitra telo dimanjato. Ny Ansomone® dia manondro ny tsy fahampian'ny fivontonganana noho ny tsy fahampian'ny hormone (GHD) sy ny aretina Turner na ny tsy fahampian-janany. Ny Ansomone® dia azo ampiasaina hanasitranana ny ratra na fandidiana ny ratra ary misy fiantraikany tsara amin'ny fitehirizana ny fahanteran'ny olombelona. Ny orinasa mpamokatra ny Ansomone® dia nohamarinina ho an'ny GMP Standard amin'ny sFDA.
Generic name: Hormone hormone hormone ho an'ny tsimokaretina.
Anarana mivalona: Ansomone®
Ny fampiofanana dia: Ny hormonina mitombo ao amin'ny olombelona.
PHARMACOLOGY SY TOXICOLOGY
Ansomone® dia manao hetsika mitovy amin'ny hormonina endogenous olombelona. Izany dia afaka mampiroborobo ny fihanaky sy ny fanavahana ny chondrocyte epiphysis, hamporisihana ny fitomboan'ny sela matrices, hamporisihana ny fampiroboroboana sy fanavahana ny osteoblast; Noho izany, dia manatsara ny tahan'ny fihenam-bidy ary manatsara ny haben'ny epiphysis. Ny Ansomone® dia afaka mampiroborobo ny proteinina ao amin'ny vatana manontolo; Manodina ny tsy fitovizan'ny azota miteraka vokatry ny ratra sy ny fandidiana; Manitsy ny hypoproteinemia noho ny aretina mafy na hepatocirrhosis; Mampirisika ny fanamafisana ny globina mitam-basy sy ny fielezan'ny lymphadenoid, ny macrophage ary ny lymphocytes, ka hampitombo ny fahaiza-manaon'ny fanoherana; Mampirisika ny fihanaky ny collagenocyte, fibroblast ary ny macrophage amin'ny toerana fandoroana sy fandidiana, ka hampitombo ny fanasitranana ny ratra; Mampiroborobo ny fampiasana kardiozytes, mampitombo ny fihenan-tsakafo sy manatsara ny tsiranoka oksizenina; Dia mifehy ny lopometabolism, ka mampihena ny kolera serôma sy ny lipoproteins lepidoptera ambany. Ampidino ny tsy fahampiana na tsy fahampian'ny hormone mitombo, mifehy ny olon-dehibe amin'ny lipometabolism, ny osteometabolism, ny fon-tsolika sy ny voa.
Voalaza fa ny vokatra ara-panafika mitovy dia azo atao amin'ny alàlan'ny subcutaneous (sc) na ny fitantanana ny atram-boasary (IM). Na dia mety hahatonga ny GH amin'ny plasma aza ny SC, dia mety hahatonga ny IGF-l ihany koa ny IM. Ny fihanaky ny GH dia mora miadana, matetika i Cmax dia mitranga ao amin'ny 3-5 ora aorian'ny fampidirana. Ny fivoahana ny GH dia amin'ny atiny sy ny voa, ny antsasaky ny fiainana dia ny ora 2-3. Ny GC tsy voavolavola voavily amin'ny urea dia saika tsy azo ovaina. Ny GH rehetra amin'ny rafi-pandehanana dia misy endrika sarotra amin'ny proteinina GH izay mahatonga ny antsasaky ny GH maharitra.
Ny Ansomone® dia manondro ny tsy fahombiazan'ny zaza vokatry ny tsy fahampian'ny hormone (GHD).
- Nirehitra Fat
- fanatanjahan-tena sy fananganana birao
- Hery avo lenta
- Fandrosoana ny atidoha
- Fomba fiasa tsara kokoa
- Fiarovana amin'ny finday
- Hanatsara ny Cholesterol Prodfile
- Fanasitranana marary mafy
- Ampitomboy ny Sexual Llibido
- Ampitomboy ny dity ny taolana
Rehefa ny famerenana ny rafitra 1 ml rano mangatsiaka ho an'ny fitsinjovana dia tokony hampidirina eo amin'ny rindrina tavoahangy, avy eo dia mihodina ny vovonana amin'ny fihetsika mihodina mihodina mandra-pahavitan'ny votoatiny tanteraka, aza mihozongozona.
Ny dosie nomerika ao amin'ny Ansomone® ho an'ny fitomboan'ny tsy fahombiazan'ny ankizy dia ny 0.1 ~ 0.15IU / kg isan-jaton'ny fitantanana manaitaitra ny 3 volana ka hatramin'ny 3 taona. Ny fitsaboana fitsaboana dia azo ovaovana araka ny toro-hevitra avy amin'ny dokotera za-draharaha.
Ny dosie nomerika amin'ny Ansomone® amin'ny fikarakarana ny hormona mafy dia 0.2 ~ 0.14IU / kg isan-kerinandro fitandremam-behivavy mandritra ny herinandro 2.
Ny hormone mitombo dia mety miteraka hyperglycemia; Azo sitranina izany raha nanohy na tapaka ny fitantanana.
Ny fanehoan-kevitra tsy mitongilana dia natao tamin'ny ankizy 1% kely tao amin'ny fitsarana. Ny fanehoan-kevitra mahazatra sasany dia ahitana fanaintainana kely, tingle, fitsaboana manodidina ny tranokala fitsaboana sy ny lozam-pifamoivoizana, arthralgias. Ireo fihetseham-po ratsy rehetra ireo dia matetika niseho tany am-piandohan'ny fitsaboana, ary ara-nofo sy azo ekena. Ny fampandrosoana maharitra ny rhGH dia mety hampivelatra ny antikora amin'ny marary vitsivitsy. Na izany aza, ny antontolon'ny antikôlôzika dia mety mahatratra hatramin'ny avo toy ny 2 mg / L izay mety hisy fiantraikany amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana.
1. Ny Ansomone® dia tsy tokony ampiasaina amin'ny marary izay nosakanana ny epiphysis.
2. Ny Ansomone® dia tsy tokony ampiasaina amin'ny marary homamiadan'ny neoplasia. Tokony hajanona ny fitsaboana GH raha toa ka misy porofo ny fivoaran'ny neoplasia.
3. Ny Ansomone® dia tsy tokony hampiasaina amin'ny marary amin'ny dingam-pangidiana haingana amin'ny aretina mafy.
FANAMPIM-PANAZAVANA SY FAMPANDROSOANA
1. Ny fitsaboana rhGH dia tokony hozaraina amin'ny marary GHD marina voamarina araka ny toro-hevitra momba ny dokotera efa za-draharaha.
2. Ho an'ny marary diabeta, tokony hampifanaraka ny fanafody fitsaboana anti-glucourea mandritra ny fitsaboana rhGH.
3. Ho an'ny marary izay vokatry ny encephaloma na ratra tsy encephalique ny GHD dia tokony hodinihina tsara ny fivoarana sy ny mety hiterahan'ny aretina mety.
4. Ho an'ny marary ACTH malemy, tokony hampiakatra ny tahan'ny ATCH satria mety hampihena ny vokatry ny fihenan'ny rhGH amin'ny fampiasana ny ACTH.
5. Ny fandidiana tiroida dia tokony hosedraina tsy tapaka satria mety hihatra amin'ny marary sasany mandritra ny fitsaboana rhGH ny fitsaboana hypothyroidism. Ho an'ireny hypothyroid ireny, ny famenoana ny tiroida dia ilaina amin'ny fiarovana ny vokatra ara-pahasalaman'ny rhGH.
6. Tokony hodinihina tsara ny fiheverana raha misy fitsaràna mandritra ny fitsaboana rhGH satria ny marary mijaly amin'ny aretin'ny rafi-pandaminana (ao anatin'izany ny GHD) dia toy ny tandindona fa mora amin'ny fisarahana ny takelaka fivavahan'ireo epiphysis.
7. Ny hormone mitombo dia mety mitarika ho amin'ny toetry ny insuline, tokony horaisina ny fiheverana raha toa ny tsy fisian'ny glycose tsy misy fetra.
8. Aza mandray mihoatra ny doka amin'ny rhGH, indray mandeha ny dosage rhGH ny fitantanana dia mety hitarika siramamy ambany ary hahomby amin'ny siramamy ambony. Maharitra ela ny fitantanana ny rhGH dia afaka mitondra any amin'ny acromegaly.
9. Ny tranonkala fitsaboana dia tokony hanovaova matetika amin'ny tranga lipoatrophy.
FANAMPIANA SY FANAMBADIANA VEHIVAVY
Tsy voatery ho an'ny vehivavy bevohoka sy ny be taona ny manaiky fitsaboana rhGH.
Ny valin'ny rhGH an'ny ankizy dia mitovy amin'ny an'ny olon-dehibe amin'ny famarotam-panafody, toxikolojia ary pharmacokinetika, ny rhGH dia azo antoka ho an'ny fampiasana zaza tsy ampy taona.
Ny valin'ny rhGH an'ny marary efa tranainy dia mitovy amin'ny an'ny olon-dehibe ao amin'ny pharmacology, toxicology sy pharmacokinetika, ny rhGH dia azo antoka ho fampiasana geriatric.
Ny valin'ny fampihorohoroana rhGH dia mety hisakanana ny glucocorticoid, mba ho ambany noho ny 10 ~ 15mg / m2 ny fatran'ny vatana mandritra ny fitsaboana rhGH.
Ny fampiasana tsiro steroid tsy misy androgenika mandritra ny fitsaboana rhGH dia mety hampitombo ny tahan'ny fitomboana.
Tsy mbola misy tatitra momba ny dosage ny rhGH; Na izany aza, noho ny fampiasana dosage dia mety hiteraka fiantraikany hafa, toy ny hypoglycemia tany am-piandohana, dia nahomby tamin'ny hyperglycemia. Maharitra mandritra ny fotoana maharitra ny fampiasana rhGh dia mety hitarika amin'ny acromegaly.
Mitazona ao amin'ny 2 ~ 8 ° C lavitra ny hazavana. Ny vahaolana voavolavina mifangaro amin'ny Sterile Water ho an'ny tsimokaretina dia voatsinjara voatahiry ao amin'ny 2 ~ 8 ° C amin'ny ora 48, fa tsy mangatsiaka.
Fanatanterahana ny fanatanterahana
Veiw ny vokatra rehetra
Phone: + 66 61 686 66 55
HGH Thailand - Buy fitomboana hormonina ao Thailand
Midira ao amin'ny facebook HGH Singapore facebook
HGH Singapore - Hormonal hormonal growth in Singapore
© 2018, Zo rehetra voatokana ny zon'ny mpamorona lalàna BuyHGHThailand.com | politika fiarovana fiainan'olona | Mombamomba ny fanompoana | Refund politika | Tsy manome antoka | Hizaha ny toerana misy azy Fanohanana avy amin'ny: FitHamster | mpiara-miasa: HGH Thai